Ny seranam-piaramanidina tara indrindra amin'ny fahavaratra any UK, EU ary Etazonia dia nanambara
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny seranam-piaramanidina tara indrindra amin'ny fahavaratra any UK, EU ary Etazonia dia nanambara
Mykonos, Santorini, ary Athens: raha toa ka misy toerana itadiavana fialan-tsasatra mety ianao, dia mety te hieritreritra indroa. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana dia manana sidina fiaingan'ny sidina ela indrindra ireo seranam-piaramanidina ireo. Saika efa ho efatra ka hatramin'ny dimy amin'ireo sidina folo niainga avy tamin'ireo seranam-piaramanidina ireo no nahemotra - koa avo lenta ny mety hampihemorana anao eny an-dalana hody avy any amin'ireo toerana fialantsasatra ireo.
Ankoatra an'i Gresy, seranam-piaramanidina Portiogey maro no nahatonga azy io ho eo amin'ny laharana folo farany nahemotra indrindra, toa an'i Ponta Delgada Island, Lajes Island, ary Lisbon. South South Seranam-piaramanidina eropeana manana taha ambony kokoa izay nanelingelina ny drafitry ny fialan-tsasatry ny fahavaratra amerikana sy eropeana amin'ity taona ity. Ny manam-pahaizana momba ny dia lavitra dia manolo-kevitra mafy fa ny mpandeha rehetra miala amin'ireo seranam-piaramanidina ireo dia hijery ny fahatarana izay mety miandry mialoha, ary manomana fotoana bebe kokoa handraisana ireo fahatarana ireo ary tsy hanadino ireo drafitry ny fialan-tsasatra ataon'izy ireo.
Seranam-piaramanidina 50 nahemotra indrindra any UK - fahavaratra 2019
(Fanadihadiana ireo seranam-piaramanidina UK manomboka amin'ny 1 Jona 2019 - 31 Jolay 2019)
Top 50 Ranking Seranam-piaramanidina depart Fampisehoana ara-potoana
Fikorontanana amin'ny sidina: ny zonao
Ny fanemorana ny sidina, ny fanafoanana ary ny fandavana ny fiaramanidina dia mety hanome ny mpandoa vola onitra hatramin'ny 700 $ isan'olona. Manarona ny sidina rehetra miainga avy any amin'ny Vondrona Eropeana, sy ireo tonga any amin'ny Vondrona eropeana amin'ny mpitatitra eropeana. Zon'ny mpandeha ny mahazo onitra raha toa ka tonga any amin'ny toerana halehany mihoatra ny telo ora taty aoriana noho izay kasaina hatao izy ireo, raha toa ka eo ambanin'ny andraikitra ara-dalàna an'ny kaompaniam-pitaterana ny anton'izany. Ny habetsaky ny fanonerana trosa dia mifototra amin'ny halavan'ny zotra. Ireo mpandeha voakasik'izany dia afaka mangataka onitra hatramin'ny telo taona aorian'ny sidina.
Seranam-piaramanidina fialan-tsasatra farany ela 50 any Eropa - fahavaratra 2019
(Fanadihadiana ireo seranam-piaramanidina eropeana manomboka amin'ny 1 Jona 2019 - 31 Jolay 2019)
Firenena seranam-piaramanidina Seranam-piaramanidina fiaingana Fampisehoana ara-potoana
1 Gresy Mykonos (JMK) 47.1%
2 Portiogaly Ponta Delgada (PDL) 52.4%
3 Portiogaly Lajes (TER) 54.4%
4 Gresy Santorini (JTR) 56.1%
5 Italia Malpensa (MXP) 58.6%
7 Gresy Atena (ATH) 60.3%
8 Italia Venise (VCE) 61.1%
10 Portiogaly Lisbon (LIS) 62.1%
12 Kroasia Misaraka (SPU) 63.4%
13 Kroasia Zagreb (ZAG) 63.6%
14 Kroasia Pula (PUY) 65.0%
15 Kroasia Dubrovnik (DBV) 65.6%
16 Soisa Geneva (GVA) 66.1%
17 Aotrisy Wina (VIE) 66.8%
21 Frantsa Paris Charles de Gaulle (CDG) 67.8%
23 Soisa Zurich (ZRH) 68.1%
28 Pays-Bas Amsterdam (AMS) 69.5%
29 Kroasia Zadar (ZAD) 70.2%
30 Belzika Bruxelles (BRU) 70.2%
31 Hongria Budapest (BUD) 70.3%
34 Soeda Stockholm Arlanda (ARN) 70.8%
35 Italia Naples (NAP) 71.2%
37 Italia Florence (FLR) 72.0%
38 Portiogaly Madeira (FNC) 72.4%
39 Repoblika Tcheky Prague (PRG) 72.5%
42 Italia Rome Leonardo da Vinci (FCO) 74.1%
44 Espaina Barcelona (BCN) 74.7%
46 Danemark Copenhagen (CPH) 74.9%
47 Soisa EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (BSL) 75.1%
48 Portiogaly Porto (OPO) 75.2%
49 Norvezy Oslo (OSL) 75.4%
Seranam-piaramanidina mihemotra indrindra 10 any Etazonia - fahavaratra 2019
(Fanadihadiana ireo seranam-piaramanidina amerikana manomboka ny 1 Jona 2019 - 31 Jolay 2019)
Top 10 Ranking Seranam-piaramanidina depart Fampisehoana ara-potoana
1 Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Newark Liberty (EWR) 63.9%
2 Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Chicago O'Hare (ORD) 64.9%
3 Seranam-piaramanidina LaGuardia (LGA) 66.0%
4 Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Denver (DEN) 66.1%
5 Dallas / Fort Worth International Airport (DFW) 68.5%
6 Seranam-piaramanidina George Bush Intercontinental (IAH) 71.0%
7 Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Charlotte Douglas (CLT) 73.3%
8 Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena John F. Kennedy (JFK) 73.7%
9 Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) 76.7%
10 Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Los Angeles (LAX) 77.5%